Tambajotra SME: fanapahana virtoaly voalohany | Avy amin'ny Linux
Te hanao ny «fanapahana virtoaly voalohany»Alohan'ny hidiranao amin'ny fampiharana sy ny fikirakirana ny serivisy tambajotra mahazatra indrindra ampiasaina amin'ny SMEs. Hoy izahay hoe "fanapahana virtoaly", satria azo antoka fa hiverina hanoratra momba ny lohahevitra efa voarakotra izahay fa amin'ny fizarana hafa: birao misy CentOS na miaraka amin'i OpenSuSE sy ny hafa. Izy ireo dia fanaterana izay mbola ananako tratry ny tsy ananako eo am-pelatànako ireo trano fitahirizana, mihoatra na latsaka feno, amin'ireo fizarana ireo.
Ao amin'ny lahatsoratray dia manome a Point isaky ny lohahevitra voaresaka. Tsy mety amin'ny fomba hafa io. Marina fa manandrana mandinika kely ny tsirairay amin'izy ireo izahay, mba ho torolàlana ho an'ireo mpamaky miteny Espaniôla rehefa mampihatra serivisy, na amin'ny fitsapana izany na amin'ny famokarana.
LNy fomba voalaza ao amin'ny lahatsoratra navoaka rehetra dia miasa na dia amin'ny tontolon'ny famokarana aza. Izahay dia tsy manoratra zavatra tsy mbola nozahanay toetra sy voamarina imbetsaka.
Miezaka ny manaraka baiko lojika amin'ny fotoana hatolotra izahay. Ny lohahevitra voalohany dia natokana hananganana anay gara. Avy eo, miaraka amin'i Debian sy CentOS, hanaovana a Hypervisor momba ny Qemu-KVM. Aorian'izay hitantanana ireo mpitsabo hypervisors, na amin'ny alàlan'ny Virt-Manager, ny baiko virt-comands, na amin'ny alàlan'ny interface interface lehibe hitantanana hypervisors, izay ny baiko Virsh, mifandray akaiky amin'ny fivarotam-boky libvirt.
1 Fa maninona isika no manizingizina ny Qemu-KVM, ny Virt-Manager ary Virsh?
2 Maninona raha manoratra momba an'i Ubuntu?
3 Inona avy ireo lahatsoratra navoakanay hatreto?
4 Inona ireo lohahevitra hodinihintsika amin'ny ho avy?
Fa maninona isika no manizingizina ny Qemu-KVM, ny Virt-Manager ary Virsh?
Ireo programa etsy ambony dia apetraka sy voalamina amin'ny fomba mitovy amin'ny fizarana voafantina ho fototry ny andiany SMB.
Izy ireo dia hita tsy misy fangarony ao amin'ny trano fitehirizan'ireo fizarana ireo ary na dia amin'ireo DVD fametrahana aza.
Farafaharatsiny fantatro fa ny Ubuntu, CentOS, ary OpenSuSE, dia manolotra safidy iray voatokana hametrahana Hypervisor.
Tsy miankina velively amin'ny tontolon'ny birao ampiasaina izy ireo.
Ny vahaolana mifototra amin'ireo fandaharana teo aloha dia mandeha tsara amin'ireto tranga manaraka ireto, miovaova ny safidin'ny Interface Administration, miankina amin'ny isan'ny hypervisors sy ny masinina virtoaly azy ireo, na arakaraka ny tian'ny tenany manokana sy ny tsirony:
Birao - Desktop
Hypervisors marobe toy ny amin'ny SME
Rahona, Cloud, Data Center, Fanompoana fampiantranoana, na izay tianao hiantsoana andiana lozisialy ara-batana sy virtoaly
Tsy azontsika lavina fa vahaolana maharitra miorina amin'ny Qemu-KVM, ary izany dia tonga amin'ny alàlan'ny toerana misy anao ao amin'ny ankamaroan'ny trano fitahirizana ny rafitra fiasa Linux be mpampiasa indrindra amin'ny tontolon'ny asa.
Ao amin'ny Data Center izay iasan'ny namako sy mpiara-miasa amiko Julio Cesar Carballo, manana mpizara 4000 mahery izy ireo miaraka amin'i Qemu-KVM, interface interface OpenStack, ary ny rafitra fiasan'ny Ubuntu Server. Ny namana iray hafa sy mpiara-miasa aminy, Eduardo Noel Nuñez, dia manana hypervisors 4 miaraka amin'i Qemu-KVM, interface an'ny oVirt, ary ny rafitra fiasan'ny CentOS 7. Aza mino fotsiny ireo andinin-teny atolotray ho ohatra malaza. Mikaroha amin'ny Internet hoe firy ny orinasa lehibe sy lehibe nandray an'io vahaolana io.
Mpamaky sy mpanaraka ny lahatsoratro maro no mahalala ny faniriako an'i Debian. Na izany aza, fantatro hatrany ny orinasa Leadership of the Red Hat, Inc. amin'ny sehatry ny fandraharahana mampiasa Linux, tsy lazaina intsony ny SuSE Enterprise sy ny derivatives.
Ny hevitro: Ny filokana an'ny Red Hat, Inc. raha ampitahaina amin'ny vahaolana VMware, dia Qemu-KVM, libvirt, Virt-Manager ary oVirt. Araka ny fahalalako sy ny fahalalako antonony, Red Hat, Inc, dia efa ela no naka ny ampahany tsara indrindra amin'ny pie,
Maninona raha manoratra momba an'i Ubuntu?
Heverinay fa ny lohahevitra noresahina momba ny fampiharana ny serivisy tambajotra ao amin'ny Debian, dia ampiasaina ho toy ny torolàlana voalohany ho an'ny Ubuntu. Canonical dia mamindra mafy ny fizarana Ubuntu Server mankany amin'ny tontolon'ny orinasa. Izaho aza efa namaky hevitra fa nandao ny Ubuntu Desktop kely izy, fomba iray izay tsy ekeko. Ubuntu no fizarana nahatonga ny fahasamihafana amin'ny fampiasana Linux amin'ny Desktops. Linux Mint, taranaky ny Ubuntu mivantana, dia manolotra - eo anelanelan'ny fanatsarana hafa- vahaolana feno kokoa amin'ny habetsaky ny fonosana ilaina voalohany, hanamorana ny fiainana ho an'ny mpampiasa vaovao amin'ny Linux.
Raha mitsidika tranokala maro natokana hamoahana lahatsoratra momba ny serivisy izahay dia hahita be dia be amin'izy ireo momba io fizarana io. Etsy ankilany, misy ireo tranonkala ofisialy Ubuntu natokana ho an'ny lohahevitry ny serivisy tambajotra izay atolotra lahatsoratra tena tsara.
Ao amin'ny lahatsoratra Fitsinjarana mandritra ny fotoana fizarana Linux nohazavainay tsara ny antony nifidiananay an'i Debian, CentOS - RHEL, ary OpenSuSe - SOISA, toy ny fizarana ifotony ho an'ny lahatsoratray.
Inona avy ireo lahatsoratra navoakanay hatreto?
Inona ireo lohahevitra hodinihintsika amin'ny ho avy?
Fampiharana ireo serivisy mahazatra indrindra amin'ny SME: DNS, DHCP, NTP, sns.
Toeram-piasana CentOS sy OpenSuSE
Virtualization amin'ny OpenSuSE
DNS sy DHCP miaraka amin'ny OpenSuSE mampiasa Yast
… Ary maro hafa
Ary mandra-pahatonga ny traikefa nahafinaritra manaraka ry namana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Tambajotra SME: fanapahana virtoaly voalohany
Mpinamana andiany mahafinaritra Federico. Araka ny efa nolazaiko dia manohy mampihatra azy amin'ny famokarana miaraka amin'ny valiny tena tsara aho. Ho fanampin'izay, efa nataoko ny laboratoara an-tranoko hanohy ireo lohahevitra izay tsy hampihariko ao amin'ny orinasako. Ny fanajana !.
Faly mihaino anao fa naka ny torohevitro, Zodiac. Andraso ny lahatsoratra manaraka.
Asa tena tsara nataonao tao amin'ny bilaogy ry Federico malalako, anisan'ireo nanangana laboratoara manokana aho taorian'ny fanoloranao tsikelikely. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo fialamboliko tsara indrindra tato ho ato ny famakiana amin'ny antsipiriany ireo lahatsoratrao sy traikefa.
Misaotra betsaka isaky ny antsipiriany ary isa-minitra arosonao hampianarana olona toa ahy dia manana zavatra betsaka hianarana.
Ka ry Lagarto malala, satria maro ny mpitsidika an'ity andiany ity - na dia tsy maneho hevitra aza izy ireo dia hanoratra foana aho. Andraso ny manaraka momba ny openSUSE!
Ahoana ny fametrahana TeX Live amin'ny Linux Mint sy ny Derivatives